USAPHO LUKAMAC MILLER LUGWEBA I-BIOGRAPHY ENGAGUNYAZISWANGA - IINDABA
Usapho lukaMac Miller Lugweba i-Biography engagunyaziswanga
Usapho lukaMac Miller lukhuphe ingxelo entsha egxeka ukukhutshwa kwencwadi ezayo kumqokeleli obizwa ngokuba Uninzi lweDope: Ubomi obungaqhelekanga bukaMac Miller , Ibhalwe nguPaul Cantor. Le ncwadi ayigunyaziswanga okanye ivunyiwe lusapho lukaMalcolm kwaye ibhalwe ngumbhali uMalcolm angenabo ubudlelwane naye, ifundeka ngolu hlobo ingxelo.
Iyaqhubeka: Ngapha koko, umbhali wayengenalo ufikelelo olunentsingiselo kwabo babesondele kuMalcolm-abahlobo, usapho, abasebenzisanayo, njlnjl. Umbhali wale ncwadi waziswa kwasekuqaleni kwenkqubo yokubhalwa kwale ncwadi ukuba usapho Abahlobo bakaMalcolm babengonwabi xa ebhala le biografi, kodwa wakhetha ukuqhubeka nxamnye nokunyanzelisa kwethu ukuba angalisebenzisi ilifa likaMalcolm ngokubhala incwadi ngaphandle kwemithombo ephambili esemthethweni.
Isiteyitimenti siqhubeka ukugxeka uCantor kunye nomshicileli, Abrams Press, ngokumisela umhla wokukhutshwa Uninzi lweDope ngoJanuwari 18, usuku olungaphambi kokuzalwa kukaMac Miller. Siye saphoxeka rhoqo sisigqibo sombhali kunye nompapashi sokulandela le ncwadi banikwa ukuqonda okupheleleyo kokungonwabi kwethu ngeemeko ezazibhalwe phantsi kwazo, kodwa ukusebenzisa umhla wokuzalwa kukaMalcolm njengesixhobo sokuthengisa kuxhaphaza kwaye kuyadanisa ngokumangalisayo.
Usapho lukaMiller lubongoza abo banqwenela ukuxhasa uMalcolm kunye nelifa lakhe ukuba bayeke ukuthenga le ncwadi intsha endaweni yoko baxhase enye incwadi ezayo kumlobi ongasekhoyo, Incwadi kaMac , Ebhalwe nguDonna-Claire Chesman, apho kwakubandakanyeka ilifa. Fumana ingxelo epheleleyo apha ngezantsi.
I-Pitchfork ifikelele kwiAbrams Iincwadi ukuba zinike izimvo.
Izabelo zeXesha elizayo zeNgoma eNtsha yePIE noChris Brown: Bukela
I-Chimpanzee EP yesiThathu
UDaniel Johnston Usweleke eneminyaka engama-58
Ngaba ucinga ukuba ndicinga ntoni?
Inyoka encinci Yazisa nge-Remix eNtsha EP: Ela Minus, Octo Octa, Georgia Anne Muldrow, More
Umhla wokukhutshwa kwengqondo
iintsuku nge dr. yen lo
Arcade umlilo amadlelo
UEddie van pick ubhubhile
Ezona zithethi zingenazingcingo zeBluetooth
Ingoma entsha yeposi malone